ဗေဒင် – Daily News
ဗေဒင်ယတြာမလိုဘဲ တနေ့တခြား ကံတွေကောင်းလာမည့် အောင်အိုးလှူနည်း
ဗေဒင်ယတြာမလိုဘဲ တနေ့တခြား ကံတွေကောင်းလာမည့် အောင်အိုးလှူနည်း နဂါးမတောင်မှ ဝိဇ္ဇာဓိုရ် ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အောင်အိုးလှူနည်း ဆရာတော်ကြီးများမေတ္တာဓာတ်ခံယူပြီး ဘုရားကိုလှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ယတြာ ချေ စရာမလိုဘဲအခက်အခဲများပပျောက်စေခြင်း၊ အောင်ဓာတ်ရပြီး အဆင်ပြေအောင်မြင်စေခြင်း၊ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ မေတ္တာဓာတ်ကိုခံယူနိူင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရနိုင်တဲ့ ရတနာသုံးပါးကိုဦးထပ်ထားတဲ့အောင်အိုးလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်အိုးထဲမှာ ၊အုန်း၇ညွန့် ၊သပြေ၇ညွန့် ၊ကံကော် ၇ညွန့် ၊ကံတက်သား ၇လက်မ […]
၈ ရက္အတြင္း ေငြဝင္ၾကမ္းေစမယ့္ ေကာ္ဖီအေအး ၃ခြက္ကပ္ေပး ယၾတာ….
March 8, 2022 Min Thuta 0
၈ရက်အတွင်း ငွေဝင်ကြမ်းချင်ရင် ဒီမနက် ကော်ဖီအအေး ၃ခွက်ကပ်လှုပါ ငွေဝင်ကြမ်းချင်ရင် ကော်ဖီအအေး ၃ခွက်ကပ်လှုပါ ​ဒီယတြာက ၈ရက်အတွင်း ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် ။အရမ်းထူးခြားပါတယ်​။မမျှော်လင့်ပဲကို ဝင်လာတက်ပါတယ်။ ​၆.၂.၂၀၂၁ မနက် ၅:၃၀ ကနေ ၁၁:၀၀ အတွင်း မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ကြည်ညို သဒ္ဒါများစွာဖြင့် ကော်ဖီအအေး(၃)ခွက်ကပ်လှုပါ ။ […]
လူနကၡတ္၊ နတ္နကၡတ္၊ ဘီလူးနကၡတ္ တို႔၏ စရိုက္လကၡဏာမ်ား၊ မိမိနကၡတ္အေၾကာင္း သိလိုပါက
လူနက္ခတ်၊ နတ်နက္ခတ်၊ ဘီလူးနက္ခတ် တို့၏ စရိုက်လက္ခဏာများ၊ မိမိနက္ခတ်အကြောင်း သိလိုပါက လူနက္ခတ်၊ နတ်နက္ခတ်၊ ဘီလူးနက္ခတ် တို့၏ စရိုက်လက္ခဏာများ(UniCode ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ဇော်ဂျီ ကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) သင် ဘာနက္ခတ် ပိုင်ရှင်လဲ ? မိမိတို့၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို ၃ […]
နေ့ချင်းညချင်းစီးပွားတက်စေမယ့် ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ ယတြာလက်ဆောင်မွန်များ
February 19, 2022 Min Thuta 0
နေ့ချင်းညချင်းစီးပွားတက်စေမယ့် ဆရာဇင်ယော်နီရဲ့ ယတြာလက်ဆောင်မွန်များ ရှေးဆရာတို့သည် ငွေကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ၊ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စစသည် စသည်တို့တွင် အလျင်အမြန် အောင်မြင် ပြီးမြောက်လိုသောအခါ နေ့ ချင်းညချင်းဟူသော အစီအရင်ကို စီရင်လေ့ရှိကြရာ တွင် စီရင်ပုံစီရင်နည်းမှာ ကြွေပန်း ကန်ပြားတစ်ချပ် ပေါ်၌ ချင်းတက်တစ်တက်ကို တင်ပြီးသကာလ ထို ချင်းတက်ပေါ်တွင် မီးထွန်း၍ […]
လောကမှာ ချစ်ခြင်းနှင့်အစတည်လာခဲ့တဲ့ သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဟာ တစ်နေ့တော့ အိမ်ထောင်ပြုလို့ မိသားစုဘဝကို တည်ဆောက်ပြီး သား၊မြေတွေရတဲ့ အထိ ရိုးမြေကျ အဖိုးကြီး၊အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ နေထိုင်လိုကြတာဖြစ် တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ရည်မှန်ပြီး ကိုယ်အလွန် ချစ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ရဖို့ ဘဝအခက်အခဲများစွာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး စွန့်စားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုအချစ်ရဲ့အားတွေ၊သတ္တိတွေနဲ့ တူနှစ်ကိုဘဝလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရတဲ့အချိန်မှာ […]
ကျွန်ုပ်၏ဟောခန်းသို့ လာရောက်ကြသော မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် လက်ပြတ်လက္ခဏာပါရှိသူများ အမြောက်အများပါရှိပြီး အချို့သော လက္ခဏာပညာလိုက်စားသူများအနေနှင့်လည်း လက်ပြတ်အကြောင်းကို မေးမြန်းတတ်ကြပေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း လက်ပြတ်နှင့်ပါတ်သက်သော လက္ခဏာဆိုင်ရာ အချက်အလက်တို့ကို သေချာသုတေသနပြုခဲ့ဖူးသည်။လက်ပြတ်အမှတ်အသားနှင့်ပါတ်သက်သော လက္ခဏာဆိုင်ရာဟောပြောခြင်းသည် မေဂျာတစ်ခုသီးသန့်ဖြစ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အလွန်ကျယ်ဝန်းသည့် လက်ပြတ်အမှတ်အသားအတွက် ကျမ်းများလည်း ထွက်ရှိပြီး သုတေသနများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယနေ့အထိ မတူကွဲပြားသော လက်ပြတ်အမှတ်သား […]